Waajjira Mana-maree Ameerikaa Keessatti Dhuga-bahinsa Dhiittaa Mirga Uummata Oromoo Gegeessame
Dhugaa bahumsii dhimma Oromoo irratti Galma Walgahii Kongireesii Amerikaatti kenname, Ebla 19, 2016
Waa’ee dhiittaa mirga dhala-namaa Itiyoophiyaa keessaa – keessumaa, miidhaa uummata Oromoo irratti geggeessamaa jiru irratti, har’a, galma waajira Mana-maree Yunaayitid Isteets, keessatti, dhuga-ba’insa dhihaate.
Miseensa mana marii godina Minisootaa Beetii Makikollom
​ Kanneen dhuga-ba’insa kana dhiheessan keessaa sadii: Dhalata oromoo fi gaazzexeessaa Aljeziiraa duraanii - Mohammaad Adamoo, Ameerikaatti, direktara Amnestii Internaashinaal - Adotii Akiweey fi hundeesituu fi dura-teessuu dhaabbata dhimma imammataa, Ooklaand Instiitiut, jedhamuu - Anuraataa Mitaali.
Dhugaa bahumsii dhimma Oromoo irratti Galma Walgahii Kongireesii Amerikaatti kenname.
Boonii Hoolkoom, qorattuu aadaa fi jiruu namaa (anthropologist).
Dhaga-ba’insa kanaa booda, miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee Yunaayitid Isteetsii fi Kanadaa irraa as Waashintonitti walga’an kumaan lakkaawaman, akkasumas, lammiwwan Itiyoophiyaa ka biroon, tokkumman, mana-maree Yunaayitid Isteets irraa haga Waayit Haawusitti hiriira bahan.
Waajjira Mana-maree Ameerikaa Keessatti Dhuga-bahinsa Dhiittaa Mirga Uummata Oromoo Gegeessam
Yaadawwan Ilaali (73)
Yunaayitid Isteets Gaaffii Hawaasni Oromoo Qabuuf Mariin Hiikkaa Qabu Akka Taasisamu Gaafate.
Gamtaan Afrikaa Haala Oromiyaa Keessa Jiru Hordofaan Jira Jedhe